RASMI: Xiddigaha u sharran abaal-marinnada laacibka boos walba ugu fiican sanadka UEFA ee Weerarka, Khadka dhexe, Daafaca iyo Goolhayaha oo la shaaciyey… (Messi iyo Ronaldo oo laga waayey!) – Gool FM
Haaruun September 17, 2020
(Yurub) 17 Sebt 2020. Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa shaaciyey xiddigaha u sharraxan abaal-marinta boos walba ee ugu fiican sanadka sida Goolhayaha ugu wanaagsanaa, daafaca, khadka dhexe iyo weerarka ugu fiicnaa.
Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa laga waayey musharrixiinta abaal-marinnada UEFA, waxaana ku soo baxay Lewy & lix xiddig ee kale oo kooxda Bayern Munich ah oo lagu daray Neymar.
Kooxda koobka ku guuleysatay ayaa xiddigaha ugu badan ku yeelatay musharraxiinta abaal-marinnada UEFA Champions League 2019/20, waxaana ay ku yeesheen 7 ciyaaryahan.
Waa markii ugu horreysay oo la shaaciyey saddexda goolhaye ee ku tartami doona abaal-marinta goolhayaha ugu fiican sanadka, waxaa ay kala yihiin Keylor Navas, Manuel Neuer iyo Jan Oblak.
UEFA ayaa sidoo kale shaacisay xiddigaha u sharraxan abaal-marinta daafaca sanadka, waxaana saddexda difaac ee ku tartami doonta ay u ciyaarayeen kooxda ku guuleysatay tartanka Champions League, waana David Alaba, Alphonso Davies iyo Joshua Kimmich.
Sidoo kale waxaa iyana la magacaabay saddexda laacib ee u sharraxan abaal-marinta xiddig sanadka ee Khadka dhexe, waxaana ku tartami doona Kevin De Bruyne, Thomas Müller iyo Thiago Alcántara.
Saddexda weeraryahan ee abaal-marinta weeraryahanka sanadka ee UEFA ku tartami doona waxa ay kala yihiin Robert Lewandowski iyo labada xiddig ee PSG, Kylian Mbappé iyo Neymar Jr.
Haddaba halkaan hoose ka eeg xiddigaha u sharraxan abaal-marinta sanadka boos walba ee UEFA:-
Goolhayeyaasha: Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern), Jan Oblak (Atlético de Madrid)
Daafacyada: David Alaba (Bayern), Alphonso Davies (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern)
Khadka dhexe: Kevin De Bruyne (Manchester City), Thomas Müller (Bayern), Thiago Alcántara (Bayern)
Weerarka: Robert Lewandowski (Bayern), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Neymar (Paris Saint-Germain)
Si kastaba ha noqontee, waxaa abaal-marinnada la bixin doonaa 01 bisha October marka la qabanayo isku aadka wareegga Guruubyada ee Champions League.